seomhkl, Author at
ထားပါတယ်။ ဒီလို Business
Marketing အတွက် Visual content ဟာ သာမာန် text content ထက်အားသာတဲ့အချက် ၃ ချက်
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ သာမာန် text links တွေ text content တွေထက် visual content ဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပိုရစေပါတယ်။ယခုခေတ်မှာ image , video , infographic တွေခေတ်စားလာပါတယ်။ visual နည်းပညာနဲ့တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ social networking platform ဟာ instagram နဲ့ snapchat ဖြစ်ပြီး texting ကိုအခြေခံထားတဲ့
အမိုက်စား Free Stock Photo Website များ
Image တွေဟာ Content Marketing ရဲ့တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်ဆို လဲမမှားပါဘူး။ Imageတွေဟာကျွန်တော်တို့ Post တွေကို Social Media Newfeeds တွေမှာလူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းရရှိစေရန် အများကြီးကူညီပေးနိုင်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာပုံ တစ်ပုံပြုလုပ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူ၊ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သူ၊ ပုံပြုပြင်ရန်အခက်အခဲရှိသူဖြစ်နေပါက ပုံတွေကို Download လုပ်နိုင်တဲ့ Website တွေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Website တွေက
သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ငန်းဖြစ်နေလို့ Digital Marketing အသုံးပြုဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်နေတုန်းပဲလား?
သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း က Small Business (သို့မဟုတ်) တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ငန်းဖြစ်နေတဲ့အခါ သင်က Digital Marketing လုပ်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ တချို့က Digital Marketing အကြောင်းမသိသေးလို့ ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိလို့ မလုပ်ကြဘူး။ တချို့က Digital Marketing လုပ်ချင်ပေမယ့် ငွေကုန်ကြေးကျများမယ် သိပ်မထိရောက်လောက်ဘူးထင်ပြီး မလုပ်ရဲတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Digital Marketing
Digital Marketing မှာ အရေးကြီးလှတဲ့ Analytics အကြောင်း
Posted by seomhkl/ Wednesday November 22nd, 2017/ Blog/0Comment
စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ အနာဂတ် ဆိုပြီး ကြွေးကြော်လာတဲ့ iPhone X
စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပခဲ့သော Apple Event တွင် iPhone 8 နဲ့ iPhone 8 Plus တို့ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး iPhone ဆယ်နှစ်ပြည့် အနေဖြင့် iPhone X (iPhone 10) ကို ယခင် iPhone များထက် ပိုမိုထူးခြားမှုများနှင့်အတူ ‘the future of the
Website ဆောက်ပြီးရင် ပြီးပြီလား?
Website တစ်ခု တော့ဆောက်လိုက်ပြီ၊ လွှင့်တင်ပြီးသွားလို့ ပြီးသွားပြီ၊ လူတွေ
Digital Marketing Statistics in Myanmar (2017)
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ Marketing ဋ္ဌာနအကြီးအကဲများခင်ဗျာ။
“ယနေ့အချိန် မြန်မာနိုင်ငံမှာ Digital Marketing အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့သင့်ပြီလား၊ မသင့်သေးဘူးလား” ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ ဒီ Infographic က လူကြီးမင်းအတွက် အထောက်အကူတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
http://www.SEOMyanmar.com ကို Credit ပေး၍ လွတ်လပ်စွာ Share နိုင်ပါသည်။
Posted by seomhkl/ Monday July 10th, 2017/ Blog/0Comment